Cusboonaysiinta ceeriin 6.04 | Waxaan ka socdaa mac
Cusbooneysiin u dhiganta RAW cusub ee Kaamirooyinka Dijital ah 6.04
Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiin iswaafajin RAW cusub oo loogu talagalay kamaradaha dijitaalka ah oo leh moodallo badan oo lagu daray noockan 6.04 Ku saabsan yahay sii wad inaad ku darto moodooyinka kamaradda dhijitaalka ah la jaan qaada qaabka RAW ee OS X Yosemite.
Cusboonaysiintaan cusub iyo sida xiisaha / ugubnimada, Apple sida iska cad wax kama dhaho la jaanqaadka iPhoto iyo Aperture tan iyo markii aan helnay arjiga cusub ee Sawirada tan iyo imaatinka OS X Yosemite 10.10.3, laakiin sidoo kale ma tilmaamayso dalabka ku qoran qoraaladiisa inkasta oo iswaafajinta ay muuqato.
Kaamirooyin dijital ah ayaa lagu daray liiska la jaan qaadi kara Waxay yihiin:
Canon EOS Rebel T & i / 750D / Dhunkashada X8i
Canon EOS Rebel T6s / 760D / Dhunkashada 8000D
Leica C (Nooca 112)
Haddii aadan si otomaatig ah u bilaabin cusbooneysiintan ku saabsan Mac-gaaga, ha ka welwelin inay ku dambeyn doonto imaatinka Mac-gaaga.Haddii aadan hubin haddii aad u cusbooneysiisay noocaan 6.04 xusuusnow inaad si toos ah uga heli karto nooca cusub miiska. > Dukaanka App ama toos uga helida arjiga Mac App Store> Cusbooneysiin. Xaqiiqdii ragga ka socda Cupertino waxay sii wadaan ku darida moodooyinka kamaradaha dijitaalka ah si ay u kordhiyaan taageerada qaab xirfadeedka RAW.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Cusbooneysiin u dhiganta RAW cusub ee Kaamirooyinka Dijital ah 6.04
Ku xakamee 'Touch Pad' jiilka cusub ee Apple TV
Gudaha Apple Campus 2 waxaa maamuli doona qandaraasle cusub